Injini yokuCetyiswa kweRio SEO: uLawulo lweBrand ngokwezifiso kwiNtengiso yaseKhaya eQinisekileyo Martech Zone
Cinga ngexesha lokugqibela uye kwivenkile ethengisa izinto-masiyibize ngokuba yindawo yokugcina izinto-ukuthenga into oyifunayo-masithi ngumsonto. Ngokuqinisekileyo ukhangele ngokukhawuleza kwi-intanethi kwiivenkile ezikufutshane kwaye wazimisela ukuba uye phi ngokusekwe kwiiyure zevenkile, umgama ukusuka kwindawo okuyo kunye nokuba imveliso oyifunayo ibisesitokhwe okanye hayi. Khawufane ucinge ngokwenza olo phando kwaye uqhuba uye evenkileni ukufumanisa nje ukuba ivenkile ayisekho apho, iiyure zitshintshile kwaye ngoku zivaliwe, okanye abanayo imveliso esitokhweni. Ezi meko ziyaxhalabisa ngokuqondakalayo kubathengi abalindele ukuya-kumhla, ulwazi oluchanekileyo lwendawo kwaye banokuba neziphumo ezibi kuluvo lwabathengi ngokubanzi lophawu.
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, ukuqinisekisa ukuchaneka kolwazi kwinqanaba lendawo yinxalenye ebalulekileyo yesicwangciso-qhinga sentengiso sendawo ezininzi ukuqhuba ukugcwala kweenyawo kwiivenkile zezitena nodaka. Oko bekutshiwo, ukulawulwa kwedatha ngokwembali bekuyinto echitha ixesha kunye nenkqubo ebaluleke kakhulu kubaphathi beengingqi kunye nee-franchisees ezisika ngokupheleleyo inkampani ngaphandle komfanekiso, ishiya igumbi lokungagqitywa kwebranti ngokubanzi kunye nokungachaneki.
Ukuxhobisa ii-brand zeendawo ezininzi ukugcina ulwazi oluchanekileyo kuzo zonke iindawo
I-Rio SEO ngumboneleli weqonga wentengiso ophambili wasekhaya weempawu zeshishini, iiarhente kunye nabathengisi Vula iqonga lendawo ibonelela ngemibutho yeendawo ezininzi ngesisombululo esibanzi, esidityanisiweyo esidityanisiweyo sezisombululo zorhwebo lwasekhaya ezibandakanya, uLuhlu lweNgingqi, iNgxelo yeNgingqi, amaPhepha eNgingqi, uPhononongo lwasekhaya kunye noManejala weNgingqi.
Njengenxalenye yalo UMphathi weNgingqi Isisombululo, iRio SEO kutsha nje ibhengeze inqaku elitsha, i Injini yengcebiso, eyongeza umaleko owongezelelweyo wokusebenza ukuxhasa ulawulo lweshishini kunye nokuqinisekisa ukusebenza kakuhle kokungeniswa kwedatha, ukungaguquguquki kunye nolawulo- kuluncedo kuma-franchisees kunye nabaphathi bendawo abaqhubeka nokongeza, ukususa, ukuhlela kunye nokulungisa idatha yolwazi lwasekhaya kudweliso lwabo. Isinxibelelanisi seNjini yeeNgcebiso ngokulula ukusisebenzisa sibonelela abaphathi bebhrendi abanakho ukunika abahluleli beenkcukacha zedatha ukuba bazihlaziye kunye nokuseta ezona mfuno zincinci zentsimi zokupapasha.
Izibonelelo ezongezelelweyo zeNjini yeNgcebiso ngeRio SEO zibandakanya:
Izilumkiso zeXesha langempela -Yaziswa xa kukho uhlaziyo olutsha kuhlu lwasekhaya lokuphononongwa kunye nokubeka iliso kunye nokulandelela indawo ngokuhlaziya okulindelweyo ngexesha langempela.
Ukuphononongwa ngokusebenzisana - Jonga ukuthelekisa ngecala kunye nokwabelana ngonxibelelwano olunzulu kunye nabaphathi bendawo kunye nabanye osebenzisana nabo ukuze uhambise iingxoxo malunga nokuhlaziywa kwendawo ethile.
Umxholo woMntu -Lungisa ulwazi lwasekhaya ngemifanekiso engenamda kunye nokulayishwa kwe-URL, imihlaba evulekileyo yokubhala kunye nedatha yomzi-mveliso ohlanganeyo ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zeendawo ezizezinye.
Izihluzi eziPhambili zoPhando -Khangela ulwazi olwahlukileyo lwendawo kunye nedatha ngobume, uhlobo, igama, i-ID okanye idilesi yeziphumo ezikhawulezileyo.
Ngenjini yeeNgcebiso zeRio SEO, abaphathi beempawu zeshishini kunye nabasetyenzisanayo basekuhlaleni banokuphelisa ngaphandle komthungo ukusasazeka kolwazi olungelulo. Ikwaxhobisa ii-brand zokugcina ulwazi oluchanekileyo lwasekhaya kwishishini. Ngoku, ngobuchule obunomdla beNjini yeeNgcebiso zeRio SEO, iimveliso zeshishini kwihlabathi liphela ziya kuba nokufikelela ngokuthe ngqo kwizinto ezingazange zibonwe ngaphambili, ukuqonda okupheleleyo kunye nolawulo kulwazi lwegama kunye nokuthembeka kumakhulu okanye kumawaka eendawo.
UJohn Toth, uMphathi oPhezulu weMveliso eRio SEO
Ezona Ndlela ziBalaseleyo ze-SEO
Kuqoqosho lwangoku lwedijithali, abathengi benza ukukhangela okuhamba-hambayo ukuze bafumane izisombululo ngokukhawuleza kwiimfuno zabo ngamaxabiso abonakalayo. Kuqhelekile kubathengi banamhlanje ukuba bafunde uphononongo lwebrand, jonga kwinkampani kwiphepha le-Facebook kwaye ukhangele iifoto kuGoogle nakwiYelp ukuqonda ngcono kunye nokuvavanya uphawu kunye / okanye amava ebrendi ngaphambi kokunxibelelana nayo. Oku kunyuka kwimisebenzi yokukhangela kwabathengi kubonisa isidingo esandayo seempawu zokutyala imali kwizisombululo zentengiso zasekhaya kwaye zilandele ezona ndlela zibalaseleyo ze-SEO ukunceda ukwandisa iiwebhusayithi zeempawu zazo zombini iziphumo zophando lwezinto eziphilayo kunye nezasekhaya, ukuqhuba ukuphuculwa kokusebenza kunye nokwandisa ukugcwala kwe-intanethi ukuya ngaphandle kweintanethi. Apha ngezantsi zintathu iingcebiso zokunyusa iinzame zentengiso yendawo yokuhlala ukuba zihlale ziphambili kolu khuphiswano.
Lungiselela iiwebhusayithi zeempawu zazo zombini iziphumo zophando eziphilayo kunye nezasekhaya. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuqhuba ukuphuculwa kokusebenza kunye nokugcwala okungaxhunyiwe kwi-intanethi. Ukukhangela okungafunekiyo, uGoogle kufuneka abenakho ukuqonda umxholo wesiza kunye nokuba sihambelana njani nombuzo osesandleni. Ukwahlulahlula ziqhutywa ziindlela ezilungileyo zemveli ze-SEO, kubandakanya ukusetyenziswa kwe-schema markup kunye nedatha eyakhiweyo, ubume bewebhusayithi obulungiselelwe kunye neendlela zokukhasa ezinengqiqo. UGoogle emva koko ujonge umgangatho kunye neempawu zokuzibandakanya kumzamo wokukhetha eyona 'mpendulo' kumbuzo ngamnye.
Ngokubhekisele kwi-organic ye-SEO, kukho iindawo ezimbalwa eziphambili ekugxilwe kuzo ukuhambisa inaliti kwizikhundla zeMephu yePakethi. Ekuqaleni, Qinisekisa ukuba uphawu luneenkcukacha ezicocekileyo nezingaguquguqukiyo kuzo zonke iindawo ukwakha kunye nokugcina ukuthembela kweinjini yokukhangela, kunye nokuphucula amava abathengi. Ke, sebenzisa isixhobo sokulawula uluhlu lwasekhaya ukuphelisa udweliso oluphindiweyo, Khawuleza ulungise iimpazamo kunye nemicimbi yokudweliswa kweeflegi efuna ungenelelo lwencwadi ukuqinisekisa ukuba ulwazi oluchanekileyo luyanda. Indawo ezininzi ezinokuthi zifumaneke khona ulwazi lwendawo yamashishini, iinjini zokukhangela ezinokuzithemba zikweso shishini, esikhokelela kuphuculo lwenqanaba lendawo.
Phumeza kwaye ukhuthaze isicwangciso sokujonga abathengi esisebenzayo Ukuxhobisa abaphathi bendawo ukuba bafune kwaye babonisane nabathengi babo ngexesha lokwenyani. Ngaphandle kokungena rhoqo kwempendulo yabathengi elungileyo, indawo ekuyo uphawu olunokungabonakali kwiPakethe yeMephu kaGoogle rhoqo njengoko ibingathanda. Ulawulo lwegama sele lubaluleke kakhulu kubukho bebranti yendawo kunye nenqanaba. Inyaniso, Iipesenti ezingama-72 zabathengi aziyi kuthatha isenzo, Gcwalisa ukuthenga okanye utyelele ivenkile bade bafunde uphononongo. Ukongeza kubathengi, uphononongo lukaGoogle ngokulinganayo lubalulekile kwiimpawu zenqanaba lendawo.
Iqonga lokuthengisa laseRio SEO lishishini liqinisekisiwe ukuqhuba ukubonakala kwi-Intanethi, ukubandakanya abathengi kuyo yonke inkqubo yokukhangela yendawo kunye nokuphumelela kwishishini lasekhaya kwinqanaba. Iseti yayo ebanzi, ehlanganisiweyo engenamthungo yezisombululo zentengiso yasekhaya kunye nezixhobo zolawulo lwegama ziyaqinisekiswa ukonyusa ukubonakala kwegama kwiinjini zokukhangela, uthungelwano lwentlalo, usetyenziso lweemephu nokunye.
Inqanaba leRio SEO phakathi kwabanikezeli abakhulu behlabathi kwizisombululo zokhangelo lwasekhaya kunye nezixhobo zokunika ingxelo nge-SEO, ukuqhuba ishishini ukusuka kukhangelo ukuya kwintengiso yeemveliso zorhwebo kwihlabathi liphela. Ngaphezulu kweempawu zeshishini ezili-150 kunye nabathengisi abathembele kubuchwephesha bokuyila kunye nobuchule bokuthengisa basekhaya baseRio SEO ukuqhuba inkuthazo, ukulinganisa ukugcwala kwe-Intanethi kwiiwebhusayithi zayo nakwiivenkile ezibonakalayo. I-Rio SEO ngoku isebenza kwiinkampani zeFortune 500 kumashishini ohlukeneyo kubandakanya ukuthengisa, ezemali, i-inshurensi, ukubuk 'iindwendwe nokunye.
Isifundo seNkundla se-SEO yaseKhaya-iiNdawo zokuHlala zamaXesha amaNe kunye neeRhafu
Iindwendwe zehotele eNtofontofo ekhangela ukuhlala kwazo okulandelayo ziyafuna ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwamava abanokuwalindela kwindawo nganye yophawu. Inyaniso, I-70% yabaphandi behotele kwizixhobo eziphathwayo abajongi amagama egama okanye indawo zehotele, bakwizinto zokuzonwabisa ezinje ngechibi elingaphakathi, indawo yokutyela kwindawo yokusebenzela okanye i-spa egcweleyo.
Ngokusebenza neehotele ezine neehotele, iiRio SEO zisebenzise itekhnoloji yokukhangela enamandla kunye neerejimeni zeenkonzo ezilawulwayo ukufezekisa ukuzuza okungqinisisekayo ekubonakaleni kokukhangela kunye nokubhukisha iiSpas zamaXesha amane. I-Rio SEO ithengise ngokufanelekileyo iinkonzo ze-spa zamaXesha amaNne kwaye ixhasa uluhlu lwayo lwezinto eziphilayo ngolwazi oluchanekileyo, oluhlaziyiweyo olwakha kwaye lwakhusela i-injini yokukhangela kwintengiso.
Ukusebenza kokukhangela okusekwe kwindawo ekusekwe kuyo eRio SEO kuqhube iziphumo zonyaka ophelileyo zeshishini lonyaka wesine uphawu, kubandakanya:
Ukuphakama kwe-98.9% kuludwe lwendawo ngokuchanekileyo
Iifowuni ezingama-84% ngaphezulu
Ukubhukisha i-spa ngaphezulu kwe-30% yenye yeempawu eziphambili zehlabathi zokwamkela iindwendwe.
tags: uphendlo lwasekhaya lweshishiniamaxesha amaneGoogle +Uluhlu lwasekhayaukhangelo lendawo izilumkisoindawo ezininziukuvula iqonga lendaworesortReviewsokoinjini yokucebisahlaziya imikhombandlela
Quarantine: Lixesha lokuba uye emsebenzini